वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिका कतिपय पराकम्पनहरूले धेरै नेपाली बस्तीहरूलाई खण्डहर बनायो, हजारौंको जीवन लुट्यो, धेरै चेलीहरूको सिउँदो उजाड्यो, धेरै बालबालिकाहरूलाई अनाथ तुल्यायो अनि दशौं हजारलाई घाइते बनायो । पराकम्पन अझै रोकिएको छैन । अझै दुनियाँ त्रासमा छ । बालबालिका मानसिक रुपमा बिक्षिप्त छन् । मेरी आफ्नै तीन बर्षे अबोध छोरीले बाटोमा हिंड्ने क्रममा बिटमा बसेका प्रहरीलाई सोधिन्, ‘पुलिस अंकल तपाइँले भूईचालोलाई समात्नु भो ?’ प्रहरीले उत्तर दिए, ‘त्यो भूइँचालो त भागिहाल्यो नि !’ मेरी अर्की ६ बर्षे छोरी घर भित्रै पस्न मान्दिन भने बीस महिने छोरा काखबाट भूइँमा बस्नै मान्दैन । अफिसको काम बिशेषले म बाहिर जान लाग्दा बच्चाहरु ‘बाबा नजानुस् फेरी भूइँचालो आउँदा हामी कसरी भाग्ने ?’ यो सन्त्रास सबै बालबालिकामा छ भन्ने तथ्य यसले प्रश्तुत गर्दछ ।
देशले न भूकम्प आउनु अघिको व्यवस्थापन र उचीत तयारी गर्न सकेको थियो न त भूकम्प पछिको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बहन गर्न नै सकेको छ । सरकार विदेशीको बाटोमात्र हेरिरहेको छ । जनता पनि सरकारले र संघसंस्थाले के दिन्छन् भनेर बाटो कुरिराखेका छन् । कसैले केही बाँड्यो भने पीडित र गैह्रपीडित सबै जम्मा हुन्छन् र सित्तैँमा पाएको चीज आफ्नो बनाउन तँछाडमछाड गर्दछन् । कुनै वस्तीमा राहत सामाग्री बाँड्दाको दृश्य सयौं माग्नेहरूको भीडमा एकजनाले खानेकुरा बाँड्दाको जस्तो देखिन्छ । जेठ १ गते मेरो आफ्नै जन्मथलो काशीखण्ड नगरपालिका स्थित जयमंगलटार गाउँमा आफूले काम गर्ने गरेको संस्था यूनिभर्सल पीस फेडेरेसन मार्फत केही राहत सामाग्री लिएर म आफैं पुगेको थिएँ । त्यहाँ त्यस्तै केही ७५ परिवारका लागि सेट तयार गरेर गएका थियौं हामी, जसमा त्रिपाल, ब्लाङ्केट र म्याट थियो । त्यहाँ कताकताबाट खबर पाएर धेरै मान्छे थुप्रिसकेका रहेछन् । हामीले बाँडेको राहत पीडित र निमुखा परिवारले पाउन् भन्ने भावना उपस्थित गैह्रपीडित व्यक्तिहरूमा पटक्कै देखिएन । जसले नाम लिस्टको संयोजन गरेका थिए उनले पनि आफ्नै आउरेबाउरेको नाम टिपेर दिएछन्। यो कुरा त्यतिबेला मात्र पत्ता लाग्यो जब आफूले दिएको लिस्ट सकिएपछि उनी टाप ठोकेछन् । त्यहाँ लुटको धन फूपुको श्राद्धे जस्तो स्थिति सृजना भयो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो भन्ने मैले लिएको छु ।
देशमा विदेशीले दिएको राहत पनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन, पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत पाएकै छैन, एकाध बाहेक । देशभर पहुँच भएको सरकार त दलीय भागबण्डा लगाउँछ राहत वितरणमा भने अरुको के कुरा भयो र ? जनता प्रति जिम्मेवार को छ र यो देशमा ? अरु दातृ निकाय वा संघ संस्थाहरुले त आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने अवस्था बाहेक अन्यत्र लगानी गर्दै गर्दैनन् । क्रिष्टियन चर्चले राहतको साथमा बाइबल समेत बाँडेको तथ्यले यसलाई प्रमाणित गर्दछ । यहाँ विदेशबाट सहयोग प्राप्त राहतको ठूलो हिस्सा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको हेलिकप्टर चार्टर्ड लगायत अन्य विलासिताका कार्यमा लगाउने, स्थानीय स्तरमा राहत लगेर कार्यकर्ताहरू छानीछानी पोस्ने काममा प्रयोग हुन्छ । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू समेत यसबाट एक प्रतिशत पनि अछुतो छैनन् ।
महाभूकम्पले ११ वटा पहाडि जिल्लालाई नराम्रोसित हिर्काएपछि काठमाण्डौं छोड्नेको ताँती नै लाग्यो, विशेषतः तराई र भारतीय मूकका नागरिकहरुमा । यती मात्र होइन देशै छोडेर विदेश पलायन हुने जमातको पनि कमी छैन यहाँ । पहुँच भएकाहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई भारत लगायत अन्य मुलुकमा र कतिपयले अझ युरोप र अमेरिका सम्म पनि पढ्न पठाइसकेको समाचार बाहिर आइसकेको छ । ठूला र पहुँच भएकाहरूले त बालबच्चालाई भारत, युरोप र अमेरिका पु¥याएर पनि पढाउलान् तर सामान्य व्यक्तिहरूले के गर्ने ?
भूकम्पको जोखिम सबैलाई उत्तिकै छ ( नेता भन्नेलाई पनि छ र जनता भन्नेलाई पनि, व्यापारीलाई पनि छ र क्रेतालाई पनि, शिक्षकलाई पनि छ र विद्यार्थीलाई पनि । यहाँ देश दुखेको बेलामा, यदि पहुच भएका, विशेषतः नेताहरूले छोराछोरी र आफन्तेलाई बाहिर ओसार्न लागे भने तिनले आफूलाई कसरी सामान्य नागरिकको प्रतिनिधि हुँ भन्न सक्तछन् ? जे होस् समग्रमा भन्नुपर्दा यो महाभूकम्प केही मान्छेका लागि विज्ञापन गर्ने अवसर समेत भएको छ भन्दा कुनै अतिसयोक्तिपूर्ण हुन्न ।